Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Stanislav OPIELA as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Stanislav OPIELA as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Stanislav OPIELA was born on 16th June 1952 in Levoca, Slovakia. He graduated from the Bratislava University of Economics in 1971 and from the Moscow State Institute of International Relations in 1975. He joined the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Former Czech and Slovak Federal Republic in 1975 and served in various capacities, including foreign assignments to Congo in 1984-1998 and Tunisia in 1990-1992. He served as the Charge d’ Affaires at the Embassy of Slovak Republic to Tunisia from 1993 to 1994; Deputy Director of Department of European Integration in the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic from 1994-1995; Deputy Chief of Mission and later as Charge d’ Affaires at the Embassy of Slovak Republic to Canada from 1995 to 1998; National Coordinator for the Slovak Republic to the Central European Initiative in the Ministry of Foreign Affairs from 1998-1999; Deputy Head of Mission at the Embassy of Slovak Republic to Canada, Senior Desk Officer in the Ministry of Foreign Affairs and Ambassador at the Embassy of the Slovak Republic to Canada consecutively from 1999 to 2010; Senior Desk Officer in the United Nations Department of the Ministry of Foreign Affairs from 2010 to 2011; National Coordinator in the Prime Minister’s Office for Slovak Republic’s membership to the EU Strategy for Danube Region; and as Senior Desk Officer in the Department of Americas of the Ministry of Foreign and European Affairs from 2012 to 2014. Since 2014, he has been serving as Director in the Office of the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs. He is married and has three children.
မစ္စတာ စတန်နီစလဗ် အိုပီလာ အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဆလိုဗက်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူ ညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ စတန်နီစလဗ် အိုပီလာ အား ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဆလိုဗက်နိုင်ငံ၊ လီဗိုကာမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဘရာတီစလာဗာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် မော်စကို နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး တက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ယခင် ချက်ကိုဆလို ဗက်ကီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ ကွန်ဂိုနိုင်ငံနှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ တူနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီး ယားသံရုံးများအပါအဝင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ တူနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဥရောပနိုင်ငံများ ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး ဒုတိယသံရုံးအကြီးအကဲနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥရောပအလယ်ပိုင်းဒေသ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆလိုဗက်သံရုံး ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ ဆလိုဗက် သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆလိုဗက် သံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ဆလိုဗက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွင် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးတွင် ဒင်းညုဒေသဆိုင်ရာ အီးယူမဟာဗျူဟာသို့ ဆလိုဗက် သမ္မတနိုင်ငံမှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမေရိကဦးစီးဌာနတွင် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်များအဆင့်ဆင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားသမီး (၃) ယောက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်